नानीबाबुलाई राष्ट्रकवि घिमिरेको चिठी
माधवप्रसाद घिमिरे आइतवार, पुस १६, २०७४ 1553 पटक पढिएको
नबुझेका कुरा पटकपटक सोध
हामीले आफ्नो समाज र समुदायप्रति सधैं चासो राख्नुपर्छ । त्यहाँको भाषा, कला, चालचलन, संस्कार, परम्परा आदिबारे थोरबहुत थाहा भयो भने समाजमा घुलमिल हुन सजिलो हुन्छ । अन्य समुदायका साथीहरूको चाडबाड आदिमा सहभागी बन्नुपर्छ । हिजोआज म के देख्दैछु भने, तिमीहरू अधिकांशलाई आफ्नो मातृभाषा आउँदैन । घरमा अभिभावकले बोल्दासमेत तिमीहरू लजाउने गरेको देखेको, सुनेको छु । यो ज्यादै दुःखद् पक्ष हो । भाषा हाम्रो सम्पत्ति हो, प्राण हो भन्ने कुरा कहिल्यै भुल्नु हुँदैन । यसलाई जगेर्ना गर्ने जिम्मा अब तिमीहरूकै काँधमा छ । त्यसैले तिमीहरूमा मातृभाषा, बोलचालको भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय अंगेजी भाषासमेतमा राम्रो पकड हुनै पर्छ ।
आमा र बुवा हाम्रा पहिलो गुरु हुन् । सिकाइ प्रक्रियाको थालनी उनीहरूबाटै हुन्छ । विद्यालय त औपचारिक शिक्षाको छुट्टै पाटो भयो । गुरु र आमा–बुवालाई सधैं साथीजस्तै ठान्नुपर्छ । उनीहरूलाई आदर गर्न चाहिँ नभुल्नु नि ! आफूले नजानेका र नबुझेका कुरा अरूलाई सोध्ने बानीको विकास भएन भने जीवनमा कहिल्यै प्रगति गर्न सकिँदैन । आफूले जानेका कुरा अरूलाई पनि सिकाउ । विद्यालय यन्त्रणा दिने ठाउँ होइन भन्ने कुरा साना भाइबहिनीलाई बुझाउने जिम्मा पनि तिमीहरूकै हो ।
तिमीहरूले पढेका र देखेका कुरा सम्झेर लेख्ने बानी ग¥यौ भने लेखनकलाको विकास हुन्छ । लेखेर साथीभाइलाई सुनाउने गर्नुपर्छ । पहिलो लेखाइमै कोही पनि सफल हुँदैन । बिस्तारै खारिँदै गइन्छ । म अहिले ९९ वर्षमा हिँड्दै गर्दा जीवनभर सिकेको अनुभवका आधारमा लेखिरहेको छु । नेपाली साहित्यमा अझै केही उपयोगी काम गर्ने रहर मेरा मनमा छँदैछ । अफ्ठ्यारा लाग्ने विषयमा हेल्चेक्र्याइँ गर्नु हुँदैन । त्यसमा थप मेहनत गनुपर्छ । तिमीहरूलाई रुचिअनुसारको काम मात्र गर्न मेरो सुझाव छ । कसैको लहैलहै वा करकापमा लागेर गरेका कामले क्षणिक लाभ मात्र दिन्छ । त्यसैले आफ्नो रुचि अभिभावकलाई प्रष्ट भन्नैपर्छ । नत्र कुहिराको काग बनिन्छ ।
तिमीहरूले चराले गीत गाएको, खोलाले सुसेली हालेको सुनेका छौ ? बिदाको समयमा घरबाहिर घुम्न निस्कियो भने धेरै कुरा सिकिन्छ । प्रकृति एउटा खुला पाठशाला नै हो । कोठाभित्र एक्लै मोबाइल र टीभीमा झुम्मिने बानीले खासै फाइदा गर्दैन । अझ हेर्ने सामग्री छुट्ट्याउन जानिएन भने समय मात्र बर्बाद हुन्छ । खेल्ने पढ्ने हरेक कुराको समयतालिका बनायौ भने राम्रो हुन्छ ।
साहित्यले समाज बुझाउँछ, मान्छेलाई मान्छे बनाउँछ । बजारमा बालसाहित्यको नाममा छापिएका सामग्री छ्यासछ्याप्ती पाउन थालेकोमा सन्तोष लाग्छ । नवोदित प्रतिभाका नयाँनयाँ प्रविधि अनुकूल काम देखेर मक्खै पर्छु । तर बजारमा पाइने सबै सामग्री तिमीहरूको स्तर, रुचि, भाषा, क्षमताअनुसारका छैनन् नि ! यसबाट टाढै रहन तिमीहरूले आभिभावक या गुरुको सहायता लिनै पर्छ । उमेरअनुसार पढ्ने बानी बढाउँदै लैजानुपर्छ । निम्नलिखित सामग्रीले तिमीहरूको क्षमता विकासमा पक्कै सहयोग गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका बालकविता
कृष्णप्रसाद पराजुलीका बालकविता
रामबाबु सुवेदीका बाल साहित्य
माधव घिमिरेका घामपानी, सुनपंखी चरी, बिजुले र बिजुला, बालालहरी इत्यादि ।
(राष्ट्रकवि घिमिरेसँग समीरबाबु कट्टेलले गरेको कुराकानीमा आधारित )
सुमार्गीको आरोप, ‘सिरोहियाले ब्ल्याकमेलिङ गरे’ 1759
अधिनायकवादको दिग्विजय यात्रा 516
महिलाको शव फेला 48
फिर्ता भएका माओवादी मन्त्री अझै सरकारमा ! 261
चिसोका कारण थप एकको मृत्यु 96
घुससहित इन्जिनियर पक्राउ, नासु र खरिदारलाई मुद्दा 482
नेपाल टेलिकमको मोबाइल नेटवर्क सुचारु 1974